Wasiir Maxamed: “Amniga wuu soo hagaagayaa balse waa wax waqti badan qaadanaya”. - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Wasiir Maxamed: “Amniga wuu soo hagaagayaa balse waa wax waqti badan qaadanaya”.
Wasiir Maxamed: “Amniga wuu soo hagaagayaa balse waa wax waqti badan qaadanaya”.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa faah-faahin ka bixiyay bixitaanka Ciidanka AMISOM, howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, Dhismaha Ciidanka, xiriirka Soomaaliya & Kenya.
Qorshaha bixitaanka AMISOM iyo Diyaargarowga Ciidanka Qaranka SNA ayuu ku tilmaamay in meel wanaagsan uu marayo, kahor inta aysan dhaqaaqin Askarta Midowga Midowga waxa uu sheegay in la sameynayo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab.
“Ammaanka Soomaaliya wuu soo hagaagayaa balse waa wax waqti badan qaadanaya, waxa aan u baahanahay in la hubiyo howlgalka Nabadsugidda ugu weyn uguna waqtiga dheer ee Afrika, waa in aan wadajir ula dagaalanaa Al-Shabaab” ayuu yiri Wasiir Cabdirisaaq.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq waxa uu hadalkiisa sii raaciyay “Waa in aan sare u qaadnaa awoodda Ciidanka Soomaaliya si ay u qabsadaan dhul badan una joogaan waana waxa aan diiradda in badan saareyno”.
Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya mar uu ka hadlay Xiriirka Soomaaliya & Kenya 6-bil kadib markii uu xumaaday cilaaqaadkooda iyo haatan waxa iska badalay.
“Waxa aan soo celinayay Xiriirka Diblumaasiyadeed mar uun ma aanay lahayn cilaaqaad muddo 6-bil ah, waxaa soo laabtay wada shaqeynta, waxa aan la kulmay dhiggeyga Kenya oo aan kawada hadalnay sidii loosii dhaqaan lahaa” Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS.
Qorshaha Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu idlaanayaa dhammaadka 2021, balse kulan ka dhacay Nairobi oo lagu qiimeyay arrintaan waxa ay soo jeediyeen ka qaybgalayaasha in AMISOM waqtiga loo kordhiyo maadaama xaalad doorasho ay gashay Soomaaliya isla markaana aanay diyaarsaneen Ciidankii mas’uuliyadda kala wareegi lahaa.